Union Minister signs book of condolences for India minister’s passing – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister signs book of condolences for India minister’s passing
The Union Minister for International Cooperation, U Kyaw Tin, signed the book of condolences for the Minister of External Affairs of India, Smt Sushma Swaraj, at the Indian Embassy of Myanmar on Merchant Road, Yangon, yesterday morning.
The former India’s external affairs minister served the position from 2014 to 2019 and was 67 years old when she passed away.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဟောင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းမှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုး
(၁၂-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၁၂-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အိန္ဒိယသံရုံးသို့ သွားရောက်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဟောင်း Smt. Sushma Swarj ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် စာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဟောင်းသည် ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုကွယ်လွန် ချိန်တွင် အသက် ၆၇ နှစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။